မိမိနတေဲ့အိမျက စီးပှားတကျမယျ့အိမျလား..? စီးပှားခိုကျမယျ့အိမျလား..? – Cele Lover
မိမိနတေဲ့အိမျက စီးပှားတကျမယျ့အိမျလား..? စီးပှားခိုကျမယျ့အိမျလား..?
ကိုယျယခုနထေိုငျနတေဲ့ အိမျဟာ ဘယျအမြိုးအစားထဲမှာပါနလေဲဆိုတာလလေ့ာဆနျးစဈကွညျ့လိုကျရအောငျလအေိမျရဲ့ခေါငျးရငျးနအေိမျသညျမိမိအိမျထကျမွငျ့ပွီးခွရေငျးအိမျသညျလညျးမိမိအိမျထကျမွငျ့ပါကကိုယျနထေိုငျသောအိမျသညျအမိုးနိမျ့နလြှေငျအိမျပုခကျဟုချေါသညျ နထေိုငျသော မိသားစုစီးပှားတကျသညျကိုယျ့အိမျခေါငျးရငျးအိမျကအမိုးနိမျ့မညျ ။ကိုယျ့အိမျခွရေငျးကလဲ အမိုးနိမျ့မညျ ကိုယျ့အိမျကအလယျမှ အမိုးမွငျ့မားနပေါကအိမျမွငျ့မိုရျဟုချေါသညျ ။လူကွီးမိဘတို့ကို ခေါငျးရငျးဘကျထား၍ပွူ စုလုပျကြှေးအားသဒ်ဓါပွညျ့ကအထူးကောငျးမှနျ၏ ။ကိုယျ့အိမျ၏ခေါငျးရငျးကမွငျ့မညျ ။ကိုယျ့အိမျ၏ ခွရေငျးက ကိုယျ့အိမျထကျနိမျ့နပေါကအိမျတောငျတနျးဟုချေါသညျ ။
တဈစိမျ့စိမျ့စီးပှားဖွဈ၏။ကိုယျ့အိမျ၏ခေါငျးရငျးကနိမျ့၍ကိုယျ့အိမျ၏ ခွရေငျးအိမျက မွငျ့နပေါကစီးပှားအသညျးအသနျရှာရတတျပသေညျ ရဆေနျအိမျဟုချေါသညျ။ရှေးလူကွီးမြားကမဝယျသငျ့ဟုဆိုကသြညျကိုယျ့အိမျ၏ခေါငျးရငျးနားတှငျ မီးဖိုအကွီးကွီးဖွငျ့စီးပှားရှာသောအိမျရှိနပေါက ထိုအိမျကိုဘုရားဆောငျရှခွေ့ငျးသို့မဟုတျအိမျအမိုးထပျမွှငျ့ခွငျးပွုအပျ၏မကနျြးမမာဖွဈ တတျ၏ ။
သတိထားအပျ၏ ။ကိုယျ့အိမျ၏ ဘေးဘယျညာအိမျတို့မှဆူညံစကား ပွငျးသောအသံခြဲ့စကျဆောငျးဘောကျဈအသံအဆဲအဆိုနူတျကွမျးတမျးခွငျးပွုလုပျနပေါကထိုအိမျသညျနတျဆိုးလှညျးအိမျဟုချေါသညျ။အမင်ျဂလာအသံကွားတှငျညပျနေ၍ဖွဈသညျ ။မတ်ေတသုတျ မပွတျသရဇ်ဈယျအပျ၏ ။အလှနျစပျစပျစုစုနိူငျသော အိမျနီးပါးခငျြးငှအေခြေးအငှားအလှနျပကျစကျ၍ပွနျဆပျလြှငျလကျအလှနျခကျသောသူတို့နှငျ့နထေိုငျရပါကမရှိပါ ဟူသောစကားကိုလိမျညာပွောတတျရ၍သီလ မလုံသောကံကို စီရငျဖနျတီးမိနတေတျ ၍အလိမ်မာဖွငျ့ဝစီကံထိမျးထိမျးသိမျးသိမျးသတိထားပွောရတတျ၏။ ဝစီဗဒေထိတိုငျးရှသညျဟူသညျနှငျ့အညီကိုယျပါ ဆငျးရဲနှမျးပါးလာတတျ၏ ။
ကိုယ်ယခုနေထိုင်နေတဲ့ အိမ်ဟာ ဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာပါနေလဲဆိုတာလေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရအောင်လေအိမ်ရဲ့ခေါင်းရင်းနေအိမ်သည်မိမိအိမ်ထက်မြင့်ပြီးခြေရင်းအိမ်သည်လည်းမိမိအိမ်ထက်မြင့်ပါကကိုယ်နေထိုင်သောအိမ်သည်အမိုးနိမ့်နေလျှင်အိမ်ပုခက်ဟုခေါ်သည် နေထိုင်သော မိသားစုစီးပွားတက်သည်ကိုယ့်အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်ကအမိုးနိမ့်မည် ။ကိုယ့်အိမ်ခြေရင်းကလဲ အမိုးနိမ့်မည် ကိုယ့်အိမ်ကအလယ်မှ အမိုးမြင့်မားနေပါကအိမ်မြင့်မိုရ်ဟုခေါ်သည် ။လူကြီးမိဘတို့ကို ခေါင်းရင်းဘက်ထား၍ပြူ စုလုပ်ကျွေးအားသဒ္ဓါပြည့်ကအထူးကောင်းမွန်၏ ။ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကမြင့်မည် ။ကိုယ့်အိမ်၏ ခြေရင်းက ကိုယ့်အိမ်ထက်နိမ့်နေပါကအိမ်တောင်တန်းဟုခေါ်သည် ။
တစ်စိမ့်စိမ့်စီးပွားဖြစ်၏။ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းကနိမ့်၍ကိုယ့်အိမ်၏ ခြေရင်းအိမ်က မြင့်နေပါကစီးပွားအသည်းအသန်ရှာရတတ်ပေသည် ရေဆန်အိမ်ဟုခေါ်သည်။ရှေးလူကြီးများကမဝယ်သင့်ဟုဆိုကျသည်ကိုယ့်အိမ်၏ခေါင်းရင်းနားတွင် မီးဖိုအကြီးကြီးဖြင့်စီးပွားရှာသောအိမ်ရှိနေပါက ထိုအိမ်ကိုဘုရားဆောင်ရွှေ့ခြင်းသို့မဟုတ်အိမ်အမိုးထပ်မြှင့်ခြင်းပြုအပ်၏မကျန်းမမာဖြစ် တတ်၏ ။
သတိထားအပ်၏ ။ကိုယ့်အိမ်၏ ဘေးဘယ်ညာအိမ်တို့မှဆူညံစကား ပြင်းသောအသံချဲ့စက်ဆောင်းဘောက်စ်အသံအဆဲအဆိုနူတ်ကြမ်းတမ်းခြင်းပြုလုပ်နေပါကထိုအိမ်သည်နတ်ဆိုးလှည်းအိမ်ဟုခေါ်သည်။အမင်္ဂလာအသံကြားတွင်ညပ်နေ၍ဖြစ်သည် ။မေတ္တသုတ် မပြတ်သရဇ္ဈယ်အပ်၏ ။အလွန်စပ်စပ်စုစုနိူင်သော အိမ်နီးပါးချင်းငွေအချေးအငှားအလွန်ပက်စက်၍ပြန်ဆပ်လျှင်လက်အလွန်ခက်သောသူတို့နှင့်နေထိုင်ရပါကမရှိပါ ဟူသောစကားကိုလိမ်ညာပြောတတ်ရ၍သီလ မလုံသောကံကို စီရင်ဖန်တီးမိနေတတ် ၍အလိမ္မာဖြင့်ဝစီကံထိမ်းထိမ်းသိမ်းသိမ်းသတိထားပြောရတတ်၏။ ဝစီဗေဒထိတိုင်းရှသည်ဟူသည်နှင့်အညီကိုယ်ပါ ဆင်းရဲနွမ်းပါးလာတတ်၏ ။
Previous Article နန်ဒာလှိုငျရှာသမြှ ပိုကျဆံတှအေကုနျ သူ့ဆီမှာအကုနျအပျခိုငျးတဲ့အကွောငျးအား ခရစေတှေ့ငျးကြ ပွောပွလာတဲ့ ဇသေီဟ
Next Article မကျြစိမှုနျသူမြားအတှကျ ဆေးစှမျးကောငျး (နတျမကျြစဉျး)